JINGHPAW KASA: ဗျူဟာမှူး အောင်အောင် ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံး
ဇန်န၀ါရီ (၂၄) ကြာသာပတေး
ကချင်းပြည်နယ် ကေအိုင်အို အစိုးရ တပ်မဟာ (၅) အုပ်ချုပ်နယ်မြေ ဆဒုံး ဒေသဘက်တွင် သွားရောက်အခြေစိုက်သော ဗမာစစ်တပ် မြောက်ပိုင်းတိုင်း (မပခ) မှ ဗျူးဟာမှူး အောင်အောင် ဇန်န၀ါရီ (၂၂) ရက်နေ့တွင် သေဆုံးသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗျူဟာမှူးအောင်အောင်သည် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲတွင် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွား ရရှိကာ ၄င်းဒဏ်ရာဖြင့်ပင် သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် သိရှိရပါသည်။
Burmese Government army military tactic Aung Aung, who was from the Northern Burmese military; Kachin State, was killed in Sadung Region, which is KIA (5th) Brigade area on 22nd January 2013 according to KIA front line officer report. That military tactic Awng Awng was injured seriously and died with that injury with the KIA battle.
Kaja dik sai....,Matut n-na ya tat kau ai.... 771.. Hpunpyen bum ni hpe mung God.. Jinghpaw Wunpawng Myusha ni a-lata de bai ap ya na ra ai......,Kyu sha hpyi nga ga..... Tawra ai Jinghpaw Wunpawng Mtusha ni e......,
KIA.KIO myu tsaw sha re ning hkring niedai hta grau kaba ai myijina tai mu wa hpe mung hkum tawn da lu hkra sat kau mu karai nra aiamu ga law ai hta shi mung law ai mungdan lu hkra anut ga hkum shayawm mu
lutdaw kaw KIA.KIO asuya hpe htu hkra tsan kau na hku asu mara ai chethtut pati ni hpe mung hkum shangam da sat kau mu
ဒါမျုီး မှာကြတော့ မအေပေးတွေ တစ်ကောင်မှ comment လာရေးကြဘူး အင်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်လေ။ ဖထွေး တစ်ယောက်လုံး အသေဆိုးနဲ့ သေသွားတာကို ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်
ထိုးစစ်ဆင် လို့ဒီလိုဖြစ်တာကိုဓာတ်ပုံနှင့်တကွ ရဲထွဋ်ကိုပို့ပေးလိုက်။ဘာမှမလုပ် ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့။